Aqoontu waxay fure u tahay wax soo saar guul leh oo wax tar leh - Nidaamka Baradhada
в Frames, Injineerinka / Teknolojiyada
Xarunta ugu weyn Yurub ee loogu talagalay waxbarashada la taaban karo waxay casuumaysaa beeraleyda baradhada ruushka si ay u qaataan koorsooyin tababar ah
Xarunta tababarka tababbarka ee Beeraha ee DEULA-Nienburg (Deutsche Lehranstalt für Agrartechnik) waxay u furaysaa laba barnaamij oo ku saleysan tabobar guud oo ku saleysan baradhada oo sii kordheysa waxayna sugeysaa qof walba oo raba inuu barto tikniyoolajiyadda ugu waxtarka badan ee Yurub ee kobcinta iyo keydinta baradhada.
Ku saabsan xarunta
Xarunta tababarka tababbarka ee DEULA-Nienburg waa machadka waxbarasho ee ugu weyn nooc nooceeda ah oo ku yaal Jarmalka. Waxay ku taalaa magaalada Nienburg, waxay leedahay iskuul casri iyo tababar casri ah oo leh qolal fasallo leh wadarta guud ee qiyaastii ah 9 m000. Xarunta waxaa shaqaaleeya ilaa 80 shaqaale.
Barnaamijyada waxbarasho ee DEULA-Nienburg waxay caan ku yihiin Bartamaha iyo Bariga Yurub, Latin America iyo Afrika.
Ku saabsan barnaamijyada tababarka
Koorso wax ku ool ah "Waxsoosaar baradho"
Muddada koorsada: 10 maalmood oo shaqo.
Barnaamijku wuxuu u qaybsan yahay afar baloog, oo midkasta uu ardaygu ku guuleysto jadwalka taariikhda oo u dhigma mowduucyada la soo bartay.
Qaybta koowaad ee barnaamijka (4 maalmood). Fasallada waxaa la qabtaa qeybtii labaad ee Abriil.
Mawduucyada ugu waaweyn: diyaarinta maaddada dhirta; dillaacid; jeexdin; kala goynta dhagaxa; dharbaaxid; muuqaalada miiska sii kordhaya, abuur, baradhada chip; bacrinta; xakamaynta haramaha.
Dhismaha Labaad (2 maalmood). Waqtiga xiisadaha: qeybtii labaad ee bisha Juun.
Mawduucyada ugu waaweyn: ilaalinta dhirta; ururka waraabinta.
Balooga saddexaad (3 maalmood). Waqtiga xiisadaha: badhkii labaad ee Sebtember.
Mawduucyada: goosashada, xakameynta cudurka, ururinta kaydinta.
Afaraad Afaraad (1 maalin). Waqtiga xiisadaha: Disembar-Janaayo.
Mawduucyada ugu waaweyn: u diyaargarowga fulinta (kala saarida, baakaynta, yareynta xaddiga burburka farsamada).
Muhiim! Marka la codsado kooxda daraasadda sameysa, isbeddelada ayaa lagu sameyn karaa barnaamijka: waxyaabaha ku jira baloogyada shakhsi ahaaneed waa la ballaariyey ama la yareeyay.
2. Koorsada cilmiga ee la dardariyey "Soosaarka baradhada"
Koorsada waxaa loo habeeyay shan maalmood, tababarka ayaa loo abaabuli karaa wakhti kasta.
Fasallo ayaa lagu qabtaa dhismaha xarunta tababarka iyo aagga tababarka (dhab ahaantii, goobtani waxay ku hoos jirtaa saqaf). Xarunta tababarku waxay leedahay qalab fara badan oo casri ah GRIMME. Nidaam waraab ayaa lagu rakibay daaqadda.
Mawduucyada ugu waaweyn: diyaarinta maaddada dhirta; jeexdin; ciidda u diyaarinta dhir; miis sii kordhaya, abuur, baradhada chip; bacrinta; xakamaynta haramaha; ilaalinta dhirta; ururinta waraabinta; goosashada; ururinta kaydinta; u diyaarinta hirgelinta.
Abaabulka maalinta iskuulka
Tababarku wuxuu u dhacaa si xawli ah. Fasalladu waxay socdaan subaxdii ilaa fiidnimadii. Kaqeybgalayaasha barnaamijyada waxay inta badan waqtiga ku qaataan goobta (guriga tababarka), iyagoo qabanaya howlo la taaban karo. Qof kastaa wuxuu fursad u helayaa inuu helo xirfado ku saabsan ka shaqeynta qalabka, barto sida loogu diyaariyo isku dhafyada loogu talagalay ka baaraandegida wax soo saarka dhirta, iwm
Ujeeddada ugu weyn ee fasallada waa in la bartaa xirfadaha wax ku oolka ah, helitaanka aqoonta aragtida ayaa hoos loogu dhigay inta ugu yar ee loo baahan yahay.
Ayaa ku biiri kara barnaamijyada?
Injineero, aqoonyahanno iyo khubaro kale oo ku lug leh hannaanka wax soo saarka baradhada.
Barnaamijyadu waxay ku habboon yihiin labada qof ee raba inay ku hawlaan baradhada baradhada, iyo kuwa horeyba khibrad ugu leh kobcinta, laakiin u baahan tababar sare.
Tirada kooxda ugu fiicani waa 8-15 qof. Sida ay qabanqaabiyayaashu ogyihiin, iyada oo tiro ka mid ah kaqeybgalayaasha, shaqada kooxdu ay ka soo baxeyso qaabka "xiriirka tooska ah": ardayda ayaa weydiiya su'aalo, waxay helayaan jawaabo faahfaahsan, qof walba waxaa la siiyaa feejignaan ugu badan.
Si aad uga hesho waxa ugu badan ee fasalka, waxaa sidoo kale muhiim ah in bartayaasha kooxda ku jira ay qiyaastii yihiin heer xirfadeed.
Macallimiinta Xarunta LEULA-Nienburg ee Tababbarka Dhaqan-galka ah waa madaxdii shirkadaha ganacsi ee jira, beeralayda leh khibrad balaaran. Laakiin marka lagu daro khibrad badan oo wax ku ool ah, waxay ku tiirsan yihiin aqoonta si joogto ah looga helo koorsooyinka tababbarka sare oo ay soo qabanqaabiyeen soo-saareyaasha mashiinnada beeraha iyo qalabyo gaar ah oo takhasus leh.
Waa maxay faa'iidooyinka koorsooyinka tababarka DEULA-Nienburg?
Dhaqso, cad, hufan
Xarunta tababarka waxay ka caawineysaa kaqeybgaleyaasha barnaamijka waqti gaaban gudaheed si ay u bartaan mabaadiida aasaasiga ah ee tignoolajiyada waxsoosaarka baradho adduunka ee aadka u faa'iido badan.
Wax ka baro khaladaadka dadka kale, ee maaha kuwaaga
Khilaafka ka dhashay aqoonta aqoonta waxqabadka leh ayaa kuu oggolaanaya inaad si habsami leh u abaabusho hannaanka hawlgallada beeraha isla markaana aad uga fogaato khaladaad badan oo qaali ah oo ku yimaadda shirkadaha bilowga ah ee badanaa la kulma.
Habka shakhsi ahaaneed
Ardayda koorsooyinka waxay fursad u leeyihiin inay weydiiyaan su'aalo khuburo aqoon sare leh (cadee dhibaatooyinka shirkadaha gaarka ah, oo muujinaya astaamaha carrada, cimilada, helitaanka ilaha biyaha, iwm.) Oo ay helaan talo faahfaahsan.
Natiijooyin aad u wanaagsan
Xarunta tababarka tababbarka ee DEULA-Nienburg waxay bixisaa tababar barnaamijyo badan oo xagga beeraha ah. Kuwa ka qalin-jabiya koorsooyinkaan waxay helayaan dhiirrigelin xoog leh si kor loogu qaado waxqabadka ganacsigooda oo ay ku gaaraan meel sare oo shaqada ah.
Koorsooyinka la ballaariyay iyo kuwa gaagaaban ee "Waxsoosaarka baradhada" ayaa la soo saaray goor dhow, laakiin qorayaashoodu waxay ku kalsoon yihiin in barnaamijyada cusub ay ka mid noqon doonaan kuwa ugu awoodda badan oo la dalbaday waxayna guul weyn u horseedi doonaan dhammaan kaqeybgalayaasha.
31-ka Luulyo kanaalka telegram-ka sheekaysiga ee joornaalka "Nidaamka baradhada" - https://t.me/potatorus - dood ku saabsan koorsooyinka tababarka "Soo saarista Baradhada" ayaa dhici doonta. Su'aalaha akhristayaashayada waxaa ka jawaabi doona wakiilka DEULA-Nienburg, madaxa waaxda horumarinta mashaariicda ee wadamada CIS Alexander Zharov. Kulanku wuxuu bilaabmi doonaa 14.00 (Msk).
Tags: DEULA-Nienburgkoorso "wax soo saarka baradhada"